“Soomaalida gacmeheeda ayey ku jirtaa... iney dhibaatada Soomaaliya xal u helaan” – Ergayga QM Michael Keating | UNSOM
13:14 - 23 Mar
“Soomaalida gacmeheeda ayey ku jirtaa... iney dhibaatada Soomaaliya xal u helaan” – Ergayga QM Michael Keating
Ka hor inta aanu dhamaystirin xilkiisa oo ah madaxa ugu sareeya Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Michael Keating ayaa xoogaa waqti ku bixiyay inuu dib u eego sannadihii u adeegayay iyo aragtida mustaqbalka uu ka qabo dalka ku yaalla Geeska Afrika
Mudane Keating ayaa loo magacaabay Ergeyga Gaarka ah ee Xoghaya Guud u qaabilsan Soomaaliya iyo Madaxa Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) laguna dhawaaqay biishii Nofeembar 2015. Magacaabiddiisa waxay ka dambeysay khibrad ballaaran uu u lahaa taageeridda kala-guurka siyaasadda iyo nabadaynta, iyo sidoo kale hogaaminta barnaamijyo adag ee dhanka bani'aadamnimada iyo dib u soo kabashada ee Afghanistan, Bariga Dhexe iyo Afrika.
J. Sawirka dal laga haysto waxaa qaabeeya waxa ay muwaadiniinta dalkaas sheegaan, iyo sida ay warbaahinta caalamku u sawirto dalka. Soomaaliya waxay leedahay qurba-joog aad u weyn oo ku kala nool dunida dacalladeeda, gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyo sidoo kale Bariga Dhexe iyo Kenya. Qaar badan oo qurbo-joog ahi waxay dalka ka tageen 90-maadkii, oo ahayd waqtigii ugu xumaa ee dagaalkii sokeeye, oo waxay leeyihiin xusuus aad u badan oo khibradaas. Warka wanaagsan ayaa ah in qaar ka mid ah ay soo laabanayaan, laakiin intooda badani wali dibadda ayay ku nool yihiin - badanaa waxay shaki ka qabaan caqabadaha dalka oo ku salaysan rabshadihii iyo fowdadii ay soo mareen.
Anigu ma lihi Soomaaliya weli ma wajayso dhibaatooyin waaweyn oon leh dad badan oo sabool ah iyo kuwo nugul. Laakiin waxaa jira waxyaabo fiican oo socda, aad bayna u adag tahay in la soo tebiyo sheekooyinkaas. Mid ka mid ah kuwa sida aragtideyda ah ay ila tahay inuu yahay mid aad u muhiim ah waa sida aysan abaar u dhicin sannadkii 2017kii, oo in la soo tebiyo wax aan dhicin aad bay uga adagtahay in la soo tebiyo wixii dhacay, laakiin taasi waa sheeko aad u weyn oo guul ah. Sidoo kale, inkastoo ay weli jiraan dhacdooyinkan aadka u waaweyn ee rabshadaha ah – tii ugu xumaydna ay ahayd 14-kii Oktoobar, 2017 – dhab ahaan, marka siyaabo badan lagu qiimeeyo, nabadgelyada dad badan ayaa si tartiib tartiib ah u hagaajinaya, taasina sidoo kale waxaa lagu helay ra'yi ururin dadweyne iyo doodaha kooxaha.
S. Ka waran dhacdada/horumarka ugu weyn ee dhinka gargaarka bani'aadamnimada?
Ururrada samafalka bani'aadamnimada ayaa si aad ah ugu diyaarsanaa si ka fiican sidii ay ahaayeen sannadihii 2011-2012 markii rubuc milyan dad ah ay dhinteen. Waxay haysteen fursad aad u qoto dheer ay dadka ku gaaraan; dadka sannadihii 2011-2012 waxay mararka qaar ahayd inay u guuraan boqolaal kiilomitir si ay u helaan amni ayna u helaan gargaar – xaaladdu sidaasi ma ahayn sannadkii 2017. Waxaa si fiican oo caqligal ah loo adeegsaday ganacsiga gaarka ah taas oo gacan ka gaysatay hoos u dhigista qiimaha. Waxaa jirey nidaam kaararka faylasha oo ka-faa'iideysteyaashu ku iibsan karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin - cunto iyo biyo – oo laga helo dukaamada oo dhan oo ku yaalla waddanka oo dhan kuwaasoo isku diiwaangeliyay inay isticmaalaan barnaamijka. Taasi waxay ahayd guul. Haddana, hawlgalayaasha beesha caalamiga waxay bixiyeen lacag, lacag dhab ah, oo goor hore ayay bixiyeen. Mid ka mid ah dhacadooyinkii sannadihii 2011-2012 waxay ahayd in lacagtu timaado iyadoo soo daahday; taasi uma aysan ogolaanin dadka ka shaqeeya gargaarka bani'aadamnimada iyo xukuumadda inay ka jawaabaan.
Tanina waxay ka hadlaysaa caqabadda hortaagan sida Soomaaliya ay u yareyn karto sida ay ugu nugushahay isbeddelka cimilada, dhibaatada deegaanka, colaadaha iyo gacan-bidixaynta nidaamsan ee kooxaha, beelaha ama dadka laga tirada badan yahay. Taasi waa qorshe weyn. Waa mid adag sababtoo ah waxaa jira lacag loogu talagalay gargaarka bani'aadamnimada, oo lacagta loogu talagaly horumarinta waxay u egtahay in loo qoondeeyo kaabayaasha iyo mashaariicda waaweyn, arrintana waxay ku dhacdaa dhexda-halkaas oo ay caawinta barakacayaasha ku haboon tahay iyo sidee baad u heli kartaa fikrad ah in barakacayaasha loo arko inay fursad u yihiin magaaleynta, si loo bedelo asaaska dhaqaalaha dalka, si ay dowladdu ula shaqeyso mulkiilayaasha dhulka si ay ugu dhiirigeliso maalgashiga, waxaan wajahnaa dad badan oo dhulka laga saaro iyo muran badan, iyo dadka dalka gudihiisa ku barakacay oo horay u soo maray marxalad adag oo ayaa haddana mar kale isku arka iyagoo ku dhexjira dhibaatooyin noocyo kala duwan ah.
Heshiisku wuxuu ku saabsan yahay ciidanka, booliska, hay'adaha sirdoonka, ciidamada badda – laakiin arrinta uu ku wanaagsan yahay ayaa ah in la aqoonsado in amnigu uusan ahayn oo keliya hub iyo qalab iyo tababar. Balse uu yahay dhismaha hay'adaha amniga, sidoo kalena wax laga qabto arrimaha keena amni-darrada marka horeba. Arrimahan waxaa ka mid ah caddaalad darrada, boolis la’aanta, maamulka dowladaha hoose ee aasaasiga ah oo aan jirin, iyo wixii la mid ah. Waxaa sidoo kale heshiiska ka mid ah dhinacyo taabanaya dhaqan celin bulsho oo xooggan iyo maamulka deegaanka – waxa ay dadka qaar ugu yeeraan xasilinta.
Laakiin waxaa jirta inay guuleystaan sababtana waxaa ka mid ah awood la'aanta jirta in wax laga qabato arrimaha kale ee coolaadda keena, oo ay ka mid yihiin khilaafaad dhab ahaantii aan wax xiriir la lahayn Al-Shabaab. Waa murano la isku qabsado n dhulka, murano la isku qabsado biyaha, murano la isku qabsado dakhliga, cabashooyinka soo jireen ka ah, dareen ku aadan caddaalad darrada, qabiil dareensan in si xaq darro ah loola dhaqmo, iyo waxi la mid ah.
 XOGHAYAHA GUUD EE QM OO U MAGACAABAY NICHOLAS HAYSOM OO U DHASHAY KOONFUR AFRIKA INUU NOQDO ERGEYGA GAARKA AH EE CUSUB EE U QAABILSAN SOOMAALIYA IYO MADAXA UNSOM
 Wakiilka QM oo ku dhiiriggeliyay Soomaaliya in la dardargeliyo ansixinta heshiiska dadka naafada ah